Date My Pet » No te hampiaraka ny Dream vehivavy? Mianara Ants
No te hampiaraka ny Dream vehivavy? Mianara Ants
Impiry no nitranga izany ho anao? Ny namana ary mijoro amin'ny trano fisotroana ary hahita ny vehivavy tsara tarehy. Ianao, ary avy eo hoe dibs tsy tonga nitondra tady. Afaka mahatoky ianao fa ny vehivavy te hihaino ny tsipika, fa avy eo, tsara, ianao lela mifatotra. Raha tokony ho afaka rihana ilay vehivavy ianao hatao farany Gaga be noho ny namanao, "Nahazo Cat ny lelanao?"
Ny olona rehetra dia nanana ny anjarany ny tara any am-pianarana. Eo amin'ny fiainanao koa nisy tovovavy ity fa te hanao izany zavatra maro - ento izy avy, hankany amin'ny sarimihetsika, mihazona tanana ary amin'ny ankapobeny manana fotoana be. Fa ianao tsy afaka ny herim-po fintinina - na ianao tsy nieritreritra tsara ianao, na ianao ampy hahita foana ny vehivavy nofy ny sandrin'ny sekoly Adonis. Ary mangina niala, mieritreritra afa-tsy ny momba azy sy ny fisentoana.
Fanovana tanteraka ny lohahevitra - Inona no zavatra fantatrao momba ny vitsika? Efa tsy tena nanome kely ireo bibikely, raha mieritreritra, ianao? Ny zavatra voalohany izay tonga ao an-tsainao rehefa mahita ny andiam-bitsika dia ny bash azy ireo.
Fantatrao ve anefa fa mampianatra antsika koa ny vitsika zava-dehibe ny fiainana tany lesona amin'ny vehivavy? Andeha hojerentsika ny fomba.
Zavatra #1 - Aza miandry zavatra hitranga
Vitsika dia tsy tapaka ny hetsika; foana izy ireo manao zavatra. Ny ankamaroan'ny vehivavy tia lehilahy izay mandray anjara-raharaha. Koa raha hiandry foana ny vehivavy nofy hankatỳ aminareo ary hanolotra fitiavana, dia afaka hanadino ny vehivavy tena tianao. Raha te-tany ny vehivavy mandeha fotsiny niakatra nankany aminy, ary milaza fa tianao ny. Amin'ny tranga ratsy indrindra dia hoe izy tsy.
Zavatra #2 - Aza avela
Vitsika no Tsy hitsahatra - fantany ny toerana ary tonga azy anatin'ny tsy fahombiazana sy ny fialam-boly. Ny voalohany ianao dia fandavana? Aza manahy; fa tsy ny faran'ny fiainana. Andramo indray ... Eritrereto ireo sarimihetsika mahery fo fa amin'ny farany nahavita Woo ny vehivavy na dia nolaviny izy ireo ny fotoana sy ny indray.
Zavatra #3 - Hifantoka
Vitsika manana tanjona sy ny mifantoka manokana - fantany raha tsy afaka afa-tsy ho amin'ny fotoana henjana amin'ny hamatorana ho faty. Raha toy ny vehivavy fa tianao ny tany foana indray mahazo azy. Hahazoana antoka fotsiny ianao hanova ny tsipika sy ny fomba.
Zavatra #4 - Save ny andalana
Ants hihinana ny sakafo ary hamonjy ny sasany. Raha ny vehivavy no resahina fa tsy tokony hahafoana ny ammos rehetra indray Mandehana. Aoka ianao ho mampihomehy; ho mamorona sy ho tany am-boalohany, ary amin'ny farany dia ho anao izy.
Tsy mahatsapa intsony hoe vitsika dia tsy misy dikany, ianao? Eny, dia mampianatra antsika lesona lehibe maro eo amin'ny fiainana, anisan'izany ny iray faran'izay tsotra indrindra afaka hisarihana ny vehivavy amin'ny Flooring azy. Raha manana io vehivavy io no te-tany fotsiny manao toy ny vitsika eto. Avy eo dia tonga indray ka lazao amiko raha mbola misento tahaka ny nofy izy vehivavy iray hafa whisked Adonis.
Nahoana Men Queen tantely ny fanasarahana tsy nisy indrafo Love